अटो चलाएर दुई सन्तान डाक्टर बनाउने यी महान आमाको सम्मान स्वरुप सबैले सेयर गर्नुहोस – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/अटो चलाएर दुई सन्तान डाक्टर बनाउने यी महान आमाको सम्मान स्वरुप सबैले सेयर गर्नुहोस
अटो चलाएर दुई सन्तान डाक्टर बनाउने यी महान आमाको सम्मान स्वरुप सबैले सेयर गर्नुहोस
संसारकै महान, यो द्धा, विजेता, सम्माननीय जति शब्द पुकारेपनि आमा–बाबुका लागि अपुरो नै हुन्छ । जन्मदिनु मात्र हैन । हुर्काएर योग्य बन्ने बाटोसम्म पुर्याउनु सामान्य चीज हैन । तपाईलाई कहिलेकाही लाग्छ होला मेरो लागि त मेरा आमा बाबुको खासै योगदान छैन म आफै सक्ने भएपछि संघर्ष गर्दै यहाँ आइपुगे ।
त्यो सोच छ भने तपाई मुर्ख हुनुहुन्छ । किनकी तपाईले सोच्नु भएन की आफै सक्ने चाही कसले बनायो ? यो धर्तीमा आउँने सौभाग्य कसले दियो ? भलै कसैका लागि निक्कै ठूलो योगदान बाबु आमाले दिएको जस्तो देखिएला तर उहाँहरुको सामथ्र्य र हिम्मतका आधारमा सबै बाबा आमाले आफ्ना सबै सन्तानलाई समान गरेका हुन् ।
त्यही भीडमा आज हामी एक यस्तो महान आमाको बारेमा जानकारी दिँदैछौ । जो जीवनकालको ४२ औँ वर्षमापनि अटो चलाइरहनुभएको छ । आफ्नी साथी, संगी कोही बढ्यौलीले त कोही रोगले थलिइसके । तर कञ्चनपुरकी महान आमा गोमा (डगौरा) चौधरीको अझैपनि फुर्ति फार्ती उही छ । बिहान देखि साँझसम्म ओटो कुदाई रहनुभएको भेटिनुहुन्छ ।
जब, पुर्नवास नगरपालिका अमर बस्तीबाट १६ वर्षको उमेरमा उहाँको भीमदत्तनगरपालिका २ भाषिका धनबहादुर चौधरीसँग विवाह भयो त्यसपछि उहाँमाथी झनै संघर्षका दिनहरु थपिन थाले । कमजोर आर्थिक अवस्थाले जीवन जिउन नसकिने पो हो की भन्ने निराशाले उहाँको परिवारलाईपनि सतायो । केही बर्षपछि एकातिर घरपरिवार र कोखबाट जन्मिने सन्तानको भविष्यको विषयले औधी चिन्ता थपिन थाल्यो ।
खासै पढ्ने अवशर नपाउनुभएको उहाँलाई आफ्नो जीवनभन्दा सन्तानको जीवन एकदमै सुधारात्मक होस् भन्ने सपना जाग्न थाल्यो । कुन आमाको चाहना हुन्न र आफ्ना सन्तान सर्वोत्कृष्ट बनुन् । उहाँलाईपनि त्यही महत्वकांक्षाले हुटहुटी बढायो । तर अब उहाँले जीवनको सुरुवाती एकदमै सामान्य अर्थात शुन्य विन्दुबाट सुरु गर्नु पर्यो ।
उहाँले भविष्यको उडान साइकलबाट सुरु गर्नुभयो । साइकलमा मालसामान बोक्दै उहाँले १५ वर्ष विताएको पत्तै भएन । उक्त अवधिमा दुई सन्तानकी आमा समेत बनिसकेपछि उहाँलाई अब यो यात्राबाट मात्रपनि आफुले देखेको सपना पुरा नहुने लाग्छ । उहाँ साइकलमा मालसामान बोकेर विक्रेताकहाँ पु¥याउदै गर्दा उहाँका श्रीमानले सामान्य पसल थाप्न सक्ने बन्नुभयो ।
पसलको कारोबार र साइकलमा सामान ओसार–पसार गर्दे छोरी सरिता चौधरीलाई महेन्द्रनगर स्थित बालजागृती विद्यालयमा भर्ना गर्नुभयो । आफुले देखेको सपना भविष्यको योजना बारीमा भर्खर बिरुवा बन्न टुसाउदै गरेको बीउ जस्तै सरिता देखिन थालिन् । आमालाई झनै काममा फूर्ती बढ्न थाल्यो । सरिताले प्रवेशिका परीक्षा बालजागृती बाटै उत्कृष्ट अंक ल्याएर उत्तीर्ण गरिन् ।
छोरा सन्तोष चौधरी महेन्द्रनगर स्थित रेडिएण्ट माध्यामीक विद्यालयमा आफ्नो भविष्यको खाका कोरिरहेका थिए । दुई सन्तानको अध्ययनको सिलसिला जारीरहेपछि उहाँले साइकल बाट अब मोटरसाइकलमा समेत मालसामान बोक्न सुरु गर्नुभयो । मोफसलमा मोटरसाईकल चलाउँने आमाको रुपमा आफ्नो परिचय बदल्नुभयो ।
उहाँको मोटरसाईकल हकाईले जीवनको यात्राको उडान अलिक तिब्र बन्यो । कमाइको बचत बाट उहाँले ६ वर्ष पहिले एउटा अटो रिक्सा पनि खरिद गर्न सक्नुभयो । उहाँले आफ्नो योजनालाई साकार पार्नका लागि जीवनको उडानलाई झनै तिव्र गतिमा लैजान अब अटोको साहारा लिने निर्णय गर्नुभयो । दुई सन्तानको भविष्य उज्ज्वलको कामना सहित उहाँ निरन्तर काममा खटिन थाल्नुभयो ।
लगत्तै छोरी सरिताले स्टाफ नर्स कोर्स पुरा गर्न सफल भइन् । उनले लोकसेवा मार्फत अनमीमा नाम समेत निकालिन्। छोरी बाजुरा स्थित बाजुरा स्वास्थ्य चौकीमा सरकारी जागिरे भएकी छिन् । अब आमाका दिन आउन थालिसकेका छन् । यता छोरा सन्तोष चौधरी भैरहवा स्थित सिद्धार्थ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस (डाक्टर) अध्ययनरत छन् । उहाँलाई आशा छ अब उहाँको सपना चाँडै नै पुरा हुँदैछ ।
चन्द्रागिरी हिल्सको आइतबारदेखि शेयर बजारमा कारोबार हुने, कति पायो त ओपनिङ रेन्ज ?
आफ्नै भाईले गरे ४६ वर्षीय दाईको हत्या !
निषेधाज्ञामा थप कडाइ, नटेरे जरिवानादेखि जेलसम्म